Shirka guud ee wada hadalka – Diinsoor.com
Shirka guud ee wada hadalka
Waxaan aad u qaddarinaynaa isu soo dhowaansha ka muuqda beryahan beesha Dabarre ee Dooy. Haddaba si aan u sahalno wada hadalka iyo isdhaafsiga ra’yiga ayaa boggan Diinsoor ku soo biirinayaa in uu furo xarun lagu sheekaysto oo aan u bixinnay “Lowisheri” (Lowisheri ciddii garanaysa ayaa garanaysa).
Goobtan Lowisheri waa goob uu qof kasta soo geli karo, waxaana lagu soo geli karaa talefoonnada hoos ku qoran. Waan ognahay in dad badan oo daafaha dunida kala jooga qaarkood ay dhib ku tahay, laakiin waxaan isku dayaynaa in dadka badi ay soo geli karaan, annagoo kordhin doonna talefoonnada waddamada ay dadka kala joogaan. Kuwa Africa iyo Carabtana xal baan u heli doonnaa insha allaah.
Waxaan ka fikirnay in aan ka gudubno “WhatsUp” oo aan u gudubno cilmi kale oo ka heer sarreeya. Sababta kalliftay in la isticmaalo “WhatsUp” ayaa waxay ahayd in qofka meel kasta uu joogo uu la soo xiriiri karo shirkan. Haddaba waxaan helnay program la yiraahdo “join.me/-t-telecom”. Haddii aadan wici karin talefoonnada hoos ku xusan, waxaad isticmaali kartaa Internetka. Waxaad soo degisataa prograamka la yiraahdo “join.me”, ama hayso iPhone ama Samsung, ka dibna raac sharraxaadda uu ku siinaayo, haddii aad rabto qof ku kaalmeeyana la xiriir qofka aad isleedahay wuu kugu kaalmayn karaa (ogow WhatUp waad baratay, kanna sidoo kale u baro).
Si aad uga qaybgasho wada hadalka waxaad wacdaa:
Furaha shirka: 714-306-604
South Africa: +27105009591
Ha illobin in aad ra’yigaaga ka dhiibato adigoo ra’yigaaga ku qoraaya meesha hoose ee boggan. Waxaad nagala soo xiriiri kartaan: diinsoor@diinsoor.com
Be the first to comment on "Shirka guud ee wada hadalka"